Umzi mveliso wokubiya we China - Abenzi base China babenzi, abaXhasi
PVC wawutyabeka weld wocingo nayo luhlobo weld wocingo wocingo kodwa zipakishwe kwimiqulu ngenxa tinny enobubanzi ucingo. Ibizwa ngokuba yi-Holland yocingo lwe-Holland, i-Euro yocingo, i-Green PVC ebiyelwe ngocingo lokubiyela kweminye imimandla.
Ucingo lwecingo olujiyiweyo olu-3D lukwabizwa ngokuba lucingo olubiyelweyo, ucingo lwentsimbi olwenziweyo, ucingo lokhuseleko, ucingo lwelanga. Luhlobo lwethu olushushu lokuthengisa ucingo kummandla we-APAC ngakumbi iJapan kwaye isetyenziswa ikakhulu kwiprojekthi yelanga njengomqobo wokhuseleko.
Ucingo lwefama luhlobo locingo olwaluka njengocingo lwekhonkco kodwa luyilelwe ukuvalelwa kwemfuyo enjengeenkomo, iigusha, amaxhama, ihashe. Ke, abantu bakwanika igama elithi "ucingo lweenkomo" "ucingo lweegusha" "uthango lwexhama" "ucingo lwamahashe" okanye "ucingo lwemfuyo".
Ubume bocingo olu-L olubiyelwe ngo-L lwezakhiwo zokwakha
Ucingo olucingo olu-L olwenziwe nge-L luqhele ukusetyenziswa njengocingo lokwakha, unokulufumana kwindawo yokuhlala, izakhiwo zorhwebo, iindawo zokupaka. Kushushu ukuthengisa ucingo lokhuseleko kwimakethi ye-APCA.